Waraaqo Hanjabaad Ah, Macluumaad Kale Oo Lasoo Dusiyey & Eriksen Oo Aanu Doonayn - Akhriso Sababaha Ay Inter Milan Shaqada Uga Caydhinayso Antonio Conte - Gool24.Net
Waraaqo Hanjabaad Ah, Macluumaad Kale Oo Lasoo Dusiyey & Eriksen Oo Aanu Doonayn – Akhriso Sababaha Ay Inter Milan Shaqada Uga Caydhinayso Antonio Conte
Tababare Antonio Conte ayaa ku jira toddobaad sugnaan la’aan ah oo mustaqbalkiisa Inter Milan uu dhamaan karayo, kaddib markii ay Sevilla kaga guuleysatay Koobka Europa League.
Antonio Conte ayaa warbaahinta u sheegay inay suurtogal tahay in xili ciyaareedka dambe aanay taageereyaashu ku arki karin garoomada iyo isagoo hoggaaminaya naadigiisan balse ay kooxdani noqon doonto mid sii tartanta oo seex adag loo dhigay.
Inkasta oo Inter Milan ay xili ciyaareedkeedii ugu wanaagsanaa ee horyaalka Serie A qaadatay fasal ciyaareedkan tan iyo 2010 oo dhibic kaliya ay Juventus kaga guuleysatay, haddana waxa jira arrimo badan oo soo dedejinaya in shaqada laga caydhiyo maalmaha soo socda.
Tababarahan Talyaaniga ah ayaa toddobaad ka hor markii ay Atalanta 2-0 kaga adkaadeen waxa uu sheegay in isaga iyo ciyaartoyduba ay dareensan yihiin in maamulka kooxdu aanu u ilaalinayn, una daryeelayn sidii ay uga baahnaayeen, waxaanay taasi muujisay in xidhiidh xun uu u dhexeeyo isaga iyo Beppe Moratta oo ah qofkii shaqada tababarenimo ku siiyey Juventus sannado ka hor haddana Inter Milan maamul u ah oo mar kale siiyey shaqadan.
Bishii November, tababare COnte ayaa helay waraaqo digniin ah oo isaga iyo qoyskiisaba loogu hanjabayo, isla markaana loogu sheegay inay ku filan tahay ‘Xabbad’ kaliya oo lagu dhufo.
Inter Milan ayaa iyaduna sheegtay in farriin noocaas oo kale ah ay soo gaadhay, waxaanay ku wargelisay masuuliyiinta ammaanka si ay baadhitaan ugu sameeyaan.
Xaaska tababare Conte oo lagu magacaabo Elisabetta Muscarello ayaa waqtigaas barta facebook ku dabaacday sheekadan, waxaanay tilmaantay Talyaaniga ay ka jirto arrin xun oo xidhiidh la’aan ah, dadkuna subaxii markay soo toosaan ay waxay doonaan iskaga qoraan baraha bulshada iyagoon ka fikirin cawaaqibka ka dhalan karaya.
Sheekadan oo muddo taagnayn waxay Inter Milan ku keentay cadho ah in aanay jeclaysanin qaabka ay qoyska Conte uga fal celiyeen iyo arrimaha keenay hanjabaadda oo ah jamaahiirta kooxda oo aan la dhacsanayn hab-dhaqanka xamaasadda badan ee tababarahan.
Arrinta kale ee Inter Milan iyo Conte ay isku maan-dhaafsan yihiin ayaa waxay tahay in macallinkani aanu jeclayn inuu ciyaarsiiyo Christian Eriksen oo bishii January ay kasoo iibsadeen Tottenham, isaga oo ku andacooday in kubbad-sameeyaha reer Denmark aanu ku habboonayn shaxdiisa ka kooban 3-5-2.
Inkasta oo maamulku ay arkayaan inuu Conte dhisay koox adag oo ay qayb ka yihiin ciyaartooyo da’yar sida Nicolo Barella iyo Alessandro Bastoni, haddana waxay warbaahinta Talyaanigu sheegayaan inay soo baxayaan kala fogaansho labada dhinac ah oo keenaya in waqtiga Conte uu intan kusoo dhamaado.